VaMutambara Vanoshora Kutorwa Kuri Kuitwa Mapurazi
Kubvumbi 17, 2009
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vanoti kutorwa kuri kuitwa mapurazi nevamwe vakuru vari muhurumende pamwe nevatsigiri veZanu PF, kuri kusvibisa chimiro chehurumende yemubatanidzwa.
VaMutambara vataura mashoko aya mushure mekushanyira mapurazi ari kunzi akapambwa nevanhu veZanu PF kuChegutu. VaMutambara ndivo vari kutungamira chikwata chemakurukota chakadomwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kuti chiongorore zviri kuitika mumapurazi.
Chikwata ichi chinofanirwa kuudza VaTsvangirai zvachinenge chawana muongororo yacho neMuvhuro. Vari muchikwata ichi vanosanganisira gurukota rezveminda, VaHerbert Murerwa, gurukota rezvemukati menyika, VaGiles Mutsekwa, nevamwe.
Vamwe vakuru vakuru vari Zamu PF vari kunzi ndivo vakapamba mapurazi ari kuChegutu vanosanganisira mutungamiri wedare reseneti, Amai Edna Madzongwe, pamwe nemutauriri weZanu PF, VaNathan Shamuyarira.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti Zimbabwe ikasagadzirisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika mumapurazi, ichashaya nyika dzinoibatsira nemari.